Ngabe Ufuna Ngempela Ukusebenzela Isiqalo? | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 8, 2009 NgeSonto, ngoJuni 21, i-2015 Douglas Karr
Awukho umuzwa omubi kakhulu emathunjini akho kunalapho ukhishwa emsebenzini. Nganikezwa ibhuthi ngokungaziwa eminyakeni engaba ngu-6 eyedlule ngenkathi ngisebenzela iphephandaba lesifunda. Kwakuyiphuzu elibalulekile empilweni yami nasemsebenzini wami. Kwakufanele ngithathe isinqumo sokuthi ngizolwela empumelelweni ephakeme - noma ngabe ngizohlala phansi noma cha.
Uma ngibheka emuva, isimo sami besinenhlanhla ngokweqiniso. Ngashiya imboni eyayifa ngashiya inkampani manje eyaziwa ngokuthi omunye wabaqashi ababi kakhulu ongabasebenzela.
Enkampanini yokuqalisa, amathuba okuphumelela abekwe ngokumelene nawe. Izindleko zabasebenzi nezimbuyiselo kungenye yezitshalomali eziguquguqukayo inkampani yenkampani yokuqala engayenza. Abasebenzi abakhulu bangakhuphuka ngebhizinisi ngebhizinisi, ukuqasha okungekuhle kungangcwaba.
Kukhona okunye okwenzekayo ekuqaleni okuyimpumelelo, noma kunjalo. Izisebenzi ezazizinhle ngolunye usuku zingadinga ukudedelwa ziye kwenye. Inkampani yabasebenzi abahlanu yehluke kakhulu kunenkampani ene-10, 25, 100, 400, njll.
Eminyakeni emi-3 edlule, ngisebenze eziqalisweni ezi-3.
Isiqalo esisodwa sangidlula… izinqubo nezendlalelo zabaphathi zangiminyanisa futhi kwadingeka ngihambe. Kwakungelona iphutha labo, empeleni kwakuwukuthi bengingasenakho 'ukulunga' enkampanini. Baqhubeka nokwenza kahle kakhulu futhi basenenhlonipho yami. Ngangingeke ngisakwazi ukuba lapho.
Ukuqalisa okulandelayo kwangikhathala! Ngisebenze embonini enzima, ngenzela inkampani engenazo izinsiza kusebenza. Nganikeza unyaka wokusebenza kwami ​​ngabanika konke enganginakho - kepha yayingekho indlela yokuthi ngiqhubeke nokukhuphuka.
Nginokuqalisa manje engizizwa ngikhululeke kakhulu nge. Sisebenza cishe nabasebenzi abangama-25 njengamanje. Ngingathanda ukusho ngokuqiniseka ukuthi kuzoba inkampani engithatha umhlalaphansi kuyo; noma kunjalo, izingqinamba ziphikisana nami! Lapho sishaya abasebenzi abangamakhulu ambalwa, sizobona ukuthi ngikwazi kanjani ukubhekana nesimo. Okwamanje, ngiwukhiye empumelelweni yenkampani ngakho-ke mhlawumbe ngingahlala 'ngaphezu kwembubhiso' ye-bureaucracy futhi ngisebenze kanzima ukugcina amandla nokuthuthuka ngokukhula okukhulu.
Abanye abantu bangacabanga ukuthi ukuqala kungumqashi ononya uma benesikhwama sabasebenzi abaphezulu. Angikholwa kanjalo… ukuqala okungenayo i-churn kungikhathaza kakhulu. Kunezigaba empilweni yokuqalisa ezisebenza ngejubane lombani uma kuqhathaniswa nenhlangano esunguliwe. Uzokhathaza abanye abasebenzi futhi uzodlondlobala nakakhulu. Ngeshwa, osayizi babasebenzi bancane ekuqaleni, ngakho-ke amathuba okuhamba kwe-lateral mancane kokunye.
Lokhu kungazwakala kunonya, kepha ngincamela ukuthi kube isiqalo sabasebenzi sokuqalisa kunokulahlekelwa yikho konke.
Ngakho-ke… uma ufuna ukusebenzela ukuqala, gcina inethiwekhi yakho isondele futhi ubeke imali ethile ulungiselela. Funda kokuhlangenwe nakho okuningi ngangokunokwenzeka - unyaka ekuqaleni onempilo ungakunika isipiliyoni seminyaka eyishumi. Ngaphezu kwakho konke, thola isikhumba esijiyile.
Ngingancamela ukungasebenzeli ukuqala? Uh ... cha. Isasasa, izinselelo zansuku zonke, ukwakheka kwezinqubomgomo, ukukhula kwabasebenzi, ukuthola iklayenti elibalulekile… konke lokhu kungokuhlangenwe nakho okumangalisayo engingasoze ngafuna ukukuyeka!
Thola ukuthi yini oyithandayo, ungamangali uma uphelezelwa emnyango, futhi ulungele ukuhlasela ithuba elihle elilandelayo ngesipiliyoni esiyigugu owakhile.
Jan 8, 2009 ku-2: 38 AM
Konke lokhu kuzwakala kuyiqiniso! Ngingawafakazela impela amaningi ala maphuzu, ukuqala ngabasebenzi abayi-10 kusebenza ngokuhlukile lapho kunempumelelo ethile nabasebenzi abayi-100, njll. Kuyathakazelisa njalo ukuyibona ihamba.
Into eyodwa engiyibonile ukuthi ukusebenzela ukuqala okuncane kungimoshile! Angikaze ngizicabange ngiphindela emuva ekugayeni nsuku zonke.
Jan 8, 2009 ku-2: 56 AM
Okuthunyelwe okuhle! Ngisebenze wonke umsebenzi wami ngeziqalo futhi ngibhala izindatshana zebhulogi lami mayelana nokuqala.
Kunamaqiniso ambalwa abandayo omhlaba wokuqalisa labo abakucabangayo kumele bazi:
1. Ukusebenzela ukuqala kungukugembula NGISHO uma usezingeni likazakwethu / lomnikazi. Isikhubekiso esisodwa singonakalisa yonke inhlangano. Ngibonile ukuqala okungenakubalwa kwehluleka, ngoba umsunguli oyedwa wenza isinqumo esiqhutshwa yi-ego kuphela ukulimaza inkampani ngokungenakulungiswa.
2. Imiholo icishe ibe ngama-40% ngaphansi kwamazinga ezinkampani ezinkulu. Izinzuzo azikwazi ukuqhathaniswa (isikhathi esiningi).
3. Isikhathi esiningi, amasonto okusebenza made KAKHULU kunamazwe ezinkampani.
4. Kungenzeka ukuthi inkampani yakho izongena ngaphansi kwesikhundla sakho… cishe ama-60% (kuya ngokuthi ngubani owenza ucwaningo ezinombolweni).
5. Kufanele uhlanye, njengama-noodle ama-ramen, noma ube nokonga okukuvumela ukuba ubungozi.
Nginomsebenzi wokuhola ekuqaleni owakhula usuka kubantu abangama-20 kuye kwabayi-100 eminyakeni emi-2 (futhi usakhula) omunye ovele kusuka ku-10-50 ezinyangeni eziyisi-6 (basesebhizinisini). Kepha bekufanele futhi ngivale eyodwa ngishiye enye, ngoba ngiyazi ukuthi bazongena ngaphansi (futhi). Ungakwazi yini ukusingatha isimo esishubile?
Umhlaba wokuqalisa owalabo abanesisu sawo futhi abazimisele ukuguquguquka KAKHULU. Uma ungekho, hlala kude.
Kufana nebhizinisi lokudlela, konke okuhle / ukuthandana / okuhle okuvela ngaphandle, kepha ISIHOGO SOKUHLANYA ngaphakathi. Noma ngubani okutshela ngenye indlela uphakeme, ugcwele uyazi ukuthi yini, noma uphuze kakhulu i-koolaid.
Jan 8, 2009 ku-8: 58 AM
I-Apolinaras - ngiyabonga kakhulu ngokufaka kwakho kulokhu. Impilo ethokozisayo, ngokuqinisekile - abantu abadala abasebasha emisebenzini yabo yokuqala kudingeka baqonde umehluko omkhulu.
Jan 8, 2009 ku-3: 51 AM
Ngivumelana nombono wakho mayelana nokuqala kokujwayelekile. Kumele kushiwo kodwa, ukuthi lonke ulwazi ekuqaleni lususelwa kumakhono obuholi bomsunguli.
Ubuholi obubi nalolo daba olungaphansi kwamakhono okuphatha amaphakathi ngokuvamile kuholela kokuhlangenwe nakho okubi kanti ubuholi obuhle nangaphezulu kwamakhono okuphatha amaphakathi kungenza isipiliyoni sizuze noma ngabe ibhizinisi liyaphumelela noma liyahluleka.
Jan 8, 2009 ku-9: 03 AM
Angiqiniseki ukuthi isipiliyoni 'esiphelele' sikusunguli. Izikhathi eziningi abasunguli bangosomabhizinisi nabantu abanombono. Kwesinye isikhathi abaqoqiwe kahle ekuqashweni, ekuthengiseni, ekumaketheni, ekukhuliseni imali, ekusebenzeni, njll - angicabangi ukuthi ungabasola ngokungabi nawo wonke amakhono.
Ama-Startups aphoqeleka ukuthi aphume ngomlenze futhi enze imali enkulu kuthalente - omunye umsebenzi, abanye ngobuqotho awenzi. Njengoba u-Apolinaras esho, lokho kungathatha yonke inkampani.
Abasunguli benza okuhle kakhulu ngalokho abanakho. Kwesinye isikhathi akwanele. Leyo ingozi yokuqalisa!
Jan 8, 2009 ku-10: 01 AM
I-athikili enhle! Nemibono elandelayo. Ngicabanga ukuthi ama-start-up akhazinyulisiwe futhi enziwe abukeka elula. Uma ngokweqiniso futhi uthuthuka ngaphezu kwebhizinisi lasekhaya, kungaba wrenching impela. Uma uyosebenzela eyodwa, kufanele ube ukulungele ukuzwa ukuphakama nokwehla kanye nabanikazi.
Noma ungacabanga ukuthi uyakuqonda lokho, uze ube lapho…
Jan 8, 2009 ku-11: 39 AM
I-athikili enhle impela futhi ifike ngesikhathi futhi. Bengicabanga ngokuqhubeka ngisuke lapho ngikhona ngoba anginasiqiniseko sokuthi kukhula ini ngezikhathi ezithile kimi. Kunezinto engifuna ukuzifunda futhi angikwazi ukuzenza kuze kube yilapho singathengisa khona kuso. Kuyinselele lapho usebenza nomkhakha we-HR.
Kodwa-ke, i-opoprtunity engiyibonayo engenze ngacabanga ngayo kakhulu i-ejensi yesikhangiso yokuqalisa .. ngokoqobo phansi komgwaqo kusuka endlini yami. Lo mbhalo uzongenza ngicabange kahle ngezinto ezinyangeni ezimbalwa ezizayo futhi ngibone ukuthi inhliziyo yami ikuphi.
Jan 8, 2009 ngo-12: 37 PM
Okuthunyelwe okuhle. Kwangenza ngakhiswa konke ukwenza umthelela enkampanini encane engihlala kuyo, engisebenza kuyo. Hhayi ukuqala, kepha kuguquka njalo.
Jan 8, 2009 ngo-5: 22 PM
Ngithweswe iziqu eminyakeni emibili edlule futhi ngazama impela ukuqashwa kuma-Startups amaningana. Ngibe nenkinga. Ngangihlala ngizwa ukuthi amakhono ami nokuziphatha kwami ​​kuzolungela ukuqala kahle. Ngithemba ukuqala eyodwa noma ukusebenzela eyodwa endaweni yami elandelayo, noma nini lapho kungaba njalo.
Jan 8, 2009 ngo-7: 42 PM
Ngicabanga ukuthi ukusebenzela ukuqala kungaba kuhle. Kodwa futhi kubangwa emcabangweni wokuthi ngifuna ukuba ngusomabhizinisi futhi ngijabulela amahla-ndenyuka nempilo yokuphila okumatasa. Yilokho engingakulangazelela ekuqaleni lapho ngicabanga ukuthi izinkampani eziningi ezinkulu zinganginika zona.
Kodwa-ke ngiyabona ukuthi leyo ndlela yokuphila ayizukulingana nawo wonke umuntu ngakho-ke kuncike kakhulu kulokho okufunayo emsebenzini.
Jan 8, 2009 ngo-8: 07 PM
Ngivame ukuvumelana nawe, ngokujwayelekile.
Kepha, amaphuzu ambalwa angeziwe yile:
1) Ngumshado - ngiyanika, wena nika.
Kwesinye isikhathi lokho kulahleka ekuhumusheni ekuqaleni. Izinketho zamasheya zingaba ozankosi begolide abathandekayo kulokhu, kepha ukuqala-kokukhipha amanani alinganiselayo ngamanani aphezulu esiteleka ngokushesha akuhlanjalazwa nabasebenzi bawo, ikakhulukazi ngoba amaholo ekuqaleni kwawo ngokuvamile awekho emakethe emaphakathi.
Ngeshwa, ukuqala kakhulu kuvame ukuholwa ubuntu kanye nokuthatha izinqumo okungathinteki okunomthelela ekuqashweni nasekuqothulweni. Ufisa ukuthi lokhu kube ukusebenza okusekelwe
3) Ubuholi buyisihluthulelo
Usomabhizinisi akudingeki abe nawo wonke amakhono, kepha badinga ukuba nobuhlakani bokuqeda ukushiyeka kwabo futhi balalele abantu ababazungezile ngendlela enengqondo
4) Ukuphuma kwesisebenzi
Lokhu kuzwakala kahle ephepheni, kepha ngokuqinisekile akunjalo kumqashwa ongaqondi ukuthi amakhono abo angahambi kanjani, ikakhulukazi uma ubuholi nabasebenzi bebancane ngaphandle kwekhono eligcwele-bazibekela bona ukuze bazihlanganise nemibuzo, njengoba kuvame ukwenziwa icala enkampanini yokuqala.
5) Abantu babheke i- # 1
Imiphumela emibi yenzuzo ephezulu yabasebenzi engavunyelwanga ayiyinhle. Ukugqugquzela ukwesaba akukaze kube nempilo. Abantu abayi emisebenzini becabanga ngomsebenzi wabo olandelayo, ngakho-ke uma abangane bewa i-resume iyalolwa.
Kukonke, futhi, ngiyavumelana nokuningi okushilo, kepha ngicabanga ukuthi ubheka lokhu ngezibuko ezicwebezelayo.
Iziqalo ebeziphumelele kakhulu esikhathini samanje (Google) ziphatha abasebenzi ngenhlonipho, hhayi njengezandla eziqashiwe ezizosetshenziswa njengamathuluzi wokuzikhethela.
Into engihlala ngibuya kuyo ezindaweni zokuqala ukuqala ubudlelwano - uma ungakha ukuzwana kanye nokuvumelana ngobuholi bakho kusho ukuthi kulungile. Uma ubuholi bakho budedelana, bumile, buyinetha, busika futhi bushiya ukunwaya ikhanda lakho lapho uhlangabezana nezisindo zabo ngesilinganiso esingu-2 noma u-3X lapho-ke bengabutholi futhi bakhohliswa ukuzazisa nokungazethembi.
Jan 8, 2009 ngo-8: 08 PM
Umehluko okuwukuphela kwawo phakathi kokuqalisa nenkampani esunguliwe iminyaka yenhlangano.
Ngaphandle kwalokho, iyiphi inkampani ingafuna amahora amade kubasebenzi, inikeze ukudla kwasemini kwamahhala, inxephezele abantu kabi noma yamukele imibono emisha. Ukuqalisa okusekelwa kwe-Venture kungahle kube nezigidi ebhange, futhi izinkampani ezineminyaka engu-100 ubudala zingabhekana nezinkinga zokuhamba kwemali. Abaphathi abahle futhi abanesibindi bafihle yonke indawo.
Iminyaka yenkampani akumele yazise izinqumo zakho ngomsebenzi, kepha ngamasiko nezinkolelo zalabo abakuleyo nhlangano. Musa ukubuza ukuthi ufuna ukusebenzela ukuqala noma cha. Thola ukuthi yiziphi izimfanelo ozithola zikhanga kakhulu ezinkampanini ezijabulisayo. Ziba usuku lokufakwa bese ulandela amaphupho akho.
Jan 8, 2009 ngo-10: 39 PM
Ngizovuma ngenhlonipho, Robby.
Ubudala akuwona wodwa umehluko. Imvamisa ama-Startups asebenza ngemali ebolekwe ngezinsizakusebenza ezilinganiselwe zezezimali nezabasebenzi. Bangaphansi kwengcindezi enkulu yokukhula futhi bafinyelele ekugelezeni kwemali okuhle ngokushesha okukhulu.
Amasiko nezinkolelo kudlulwa kude ngokusinda okumsulwa ekuqaleni kwenkampani. Bheka noma iyiphi inkampani enhle namuhla enamasiko nezinkolelo ozifunayo futhi ngingagembula kancane ukuthi babengenawo lawo mathuba lapho beboshelwe imali, ezikweletini, futhi bephendula abatshalizimali abanomsindo!
Kunabalandeli abambalwa abasizayo futhi 'abaluhlaza' emsebenzini wami, kepha asinayo inzuzo yokusiza ukuguqula umhlaba (okwamanje).
Jan 9, 2009 ngo-7: 21 PM
Izitatimende zakho zibonisa umqondo wakho omkhulu, engikholwa wukuthi ukusho ukuthi kukhona igebe elimangalisayo, eliyisisekelo futhi elinomthelela phakathi kwezinhlangano ezincane nezindala. Kodwa-ke, ngiphawula okulandelayo:
Ubhala ngezinkampani “ezisebenza ngemali ebolekwe ngezimali ezilinganiselwe nezabasebenzi. Bangaphansi kwengcindezi enkulu yokuthi bakhule futhi bathole ukuhamba kahle kwemali ngokushesha okukhulu. ” Lokhu kuzwakala njengokuchazwa kwama-automaker amathathu amakhulu, esinye sezikhungo eziningi zamabhange ezisanda kwehluleka, noma empeleni iyiphi inkampani edonsa kanzima. Akukona okokuqalisa kuphela.
Ubuye ubeke ukuthi "amasiko nezinkolelo kudlulwa kude ngokusinda okumsulwa ekuqaleni kwenkampani." Kepha akukhona ukwehluleka ukusinda okukuxoshele kwisikhulu esikhulu sebhizinisi lephephandaba? Usho ukuthi bekuyindawo esabekayo ukusebenza kodwa bekungasiyena oqale ukuqedwa.
Ekugcineni, iphuzu lakho lesithathu libonakala liqukethwe ukuthi "ukusiza ukushintsha umhlaba" kudinga inzuzo. I-Kiva, IFreenet futhi kunjalo I-GNU / Linux konke ukuqala okuvele kusizile umhlaba, ngaphandle kokucabanga kakhulu ngenzuzo yabo.
Elami iphuzu lihluke impela. Yize kungaba khona abanye izimfanelo ezihambisana kakhulu, okuwukuphela komehluko oqinisekiswe ngokuphelele phakathi kwezinkampani zokuqalisa nabaqashi bendabuko iminyaka. Ngingaphonsela inselelo noma ngubani ocabanga ukuphishekela (noma ukugwema) ukuqashwa ukuze azibuze ukuthi yiziphi izinkolelo mayelana neminyaka ezazise imibono yabo.
Angicabangi ukuthi lo mlayezo umane nje ungowokufunda noma ukufundisa. Lapho uthatha isinqumo sokuthi ufuna ukusebenza kuphi, iminyaka yenkampani iyindawo engenangqondo okufanele uqale ngayo. Esikhundleni salokho, umuntu kufanele abheke imboni, izindinganiso, isimilo sokusebenza, isiko lasemsebenzini, nobuntu balabo ohlangana nabo enhlanganweni ngayinye.
Ukukhetha okwenyukayo kokuqalisa noma amabhizinisi wendabuko, ngombono wami, kuyindlela yobudala. Njengabafuna imisebenzi ababandlululayo, kufanele sihlaziye abaqashi isisekelo sezinqubo ezizwakalayo. Lokhu akubandakanyi usuku lokufakwa.
Jan 9, 2009 ngo-4: 40 PM
Bengisebenza ukuqala ezinyangeni ezi-5 ezedlule futhi ngikujabulela. Besilokhu sibeka izinsizakusebenza zethu ekuthuthukisweni kabusha kwesiza nokufaka amakhodi. Kunenjabulo enkulu kimina ngekusasa lonyaka olandelayo njengoba kufanele kube njalo kubantu abaseziqalisweni zokuqala. Ngiyazi ukuthi kuzoba nomsebenzi omningi ozayo nokuqhutshwa kwesayithi ezinyangeni eziyisithupha ezilandelayo, kodwa ngethemba lokuthi kuzokhokha futhi angikugqoki. Akuwona wonke umuntu, kepha angifuni umsebenzi wendabuko.